आफ्नो परिवार मा एक केटी थियो। आमाबाबुले सधैं प्रश्न धेरै छन्। यसलाई कसरी एक मानिस हुनेछ? के यो नाम थप उपयुक्त छ? लागि आवश्यक के छ बप्तिस्मा केटी? तिनीहरूलाई केही बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्।
बप्तिस्मा मा नाम
हाल, टेलिभिजन मा विभिन्न श्रृंखला र चलचित्र को धेरै देखाउँछ। केही आमाहरू मनपर्ने heroines को सम्मान मा आफ्नो छोरी कल। म यही नामको केटी बप्तिस्मा गर्न के गर्नुपर्छ? यो क्यालेन्डर मा हुनु आवश्यक छ। यो सबै निन्दा देखि बच्चा रक्षा हुनेछ जो सेन्ट, सम्मानको भनिन्छ गर्न आवश्यक छ। आफ्नो patroness गर्न, त्यो सुख र दुःखको सामना गर्नेछ। को सेन्ट को जीवन लागि सबै भन्दा राम्रो नाम, अधिकांश तपाईं प्रभावित एक कमाल चयन गर्नुहोस्।
बच्चालाई लागि समारोह पछि महत्त्वपूर्ण धर्म माता हुनेछ। तसर्थ, प्रश्नको जवाफ: पहिलो स्थानमा "के म बालिका बप्तिस्मा गर्नुपर्छ", हामी आमा र पिताजी godparents याद गर्नुहोस्। Godparents नियमित रूपमा सेवा प्रार्थना उपस्थित र जान्न, क्रमशः, अर्थोडक्स मसीहीहरूले हुनुपर्छ। जबकि यो साँचो हुन सक्छ तपाईंको छोरी सिकाएर, तिनीहरूले आफैलाई नयाँ कुरा सिक्न भनेर।
अब पसलमा तपाईं बप्तिस्मा, बालिका, लुगा लागि आवश्यक सबै किन्न सक्नुहुन्छ, र रुचि केटाहरू लागि त्यो भन्दा धेरै धनी छ। बालकहरूलाई अझ विविध र प्रारम्भिक बाल्यकाल मा smartly लुगा। केटी टाउको मात्र छैन टोपी, तर पनि एउटा सुन्दर रूमाल थकित गर्न सकिन्छ। बरु शर्ट को तपाईंलाई एउटा विशेष christening पोशाक लाग्न सक्छ। तपाईं एक्लै sacrament लागि लुगा पाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईं एक तयार सेट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यो godparents हेरविचार गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, भविष्यमा पोपको बच्चा प्रतिमा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र चर्च एक दान तिर्न र मेरो आमा - पवित्र ordinance लागि लुगा फेला पार्न। बप्तिस्मा केटीहरु शर्ट - यो पार र तौलिया संग सबैभन्दा आवश्यक कुरा एउटै हो।
स्वर्गको राज्य गर्न हकदार - यो sacrament आफ्नो छोरीले जमीन र परमेश्वरको mansions मसीही समुदाय को एक वास्तविक सदस्य बन्न मौका दिन्छ। बप्तिस्मा - यो एक महान र आनन्दित घटना, मनाउन निर्णय एक छुट्टी छ। परिवार सबै सदस्य, नजिक नातेदार र राम्रो मित्र सामान्यतया खुला। बधाई आफ्नो आमाबाबु देखि एक उपहार को रूप मा हुन सक्छ, विभिन्न Commemorative सुविधाहरु, दयालु शब्द र शुभकामना बोले सँगसँगै। प्रसाद लुगा प्रयोग गर्न सकिन्छ रूपमा, केही एक बच्चा, पुस्तकहरू, नांद, घुमक्कड, भाँडा, चाँदी चम्चा, र यति मा। डी लागि तथापि, एउटा उपहार छनौट हेरचाह गर्न, तपाईं sacrament आध्यात्मिक महत्त्व बारे सम्झना गर्न आवश्यक छ। उपयोगी उपहार सुसमाचारको हुनेछ, बाल बाइबल प्रार्थना पुस्तक। Novokreshchenykh केटी पहिले नै सम्भव चर्च मा मैनबत्ती राख्नु हो र सेवा आदेश दिए। जानिन्छ, मुक्तिदाता उहाँलाई आउन बच्चाहरु हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरे। यो हामी बच्चाको प्राण बचाउन सम्भव सबै गर्नुपर्छ भन्ने हो।
यहाँ एक केटी को बप्तिस्माको लागि आवश्यक छ कि आधारभूत तथ्य को एक सूची छ, तर यो पुजारी संग अग्रिम परामर्श राम्रो छ त्यसैले विभिन्न पेरिशेस मा, विभिन्न आवश्यकताहरू हुन सक्छ।
के बालिका जन्मदिन अप्रिल मा पार्टी मनाउन निर्णय?
रूसी सन्तहरू। रूसी अर्थोडक्स सन्तहरू: सूची
Iisus Hristos - राष्ट्रियता। येशू ख्रीष्टको आमा र बुबा
विवाह के हो र कसरी धेरै यो एक चर्च मा एक विवाह लागत?
बहु-रंग lichen को उपचार
काजू बढ्दै र यो के हो?
Simferopol, होटल "युक्रेन": संख्या, फोटो, मूल्यहरु र कसरी प्राप्त गर्न
दवादारू 'नियो Penotran'। समीक्षा, वर्णन